Ogaden News Agency (ONA) – Shirkii Xisbiga Radical Party oo Maalintii 2aad Galay, Warbixin.
Shirkii Xisbiga Radical Party oo Maalintii 2aad Galay, Warbixin.
Waxaa magaalada Rome ee wadanka Talyaniga si habsami ah uga socda shirkii caalamiga ahaa ee xisbiga Radical Party uu kuqabtay magaalada Rome, shirka oo galay maalintii labaad ayaa lagu casuumay dad aad ufarabadan oo siyaasiyiin iyo khuburo caalami ah isugu jira.
Shirkan oo ujeedadiisu ahayd in lagaga hadlo arimaha xuquuqul insaanka ayaa maalintiisii 1aad lagu qaadaa dhigay arimo muhiim ah oo xuquuqda aadamaha laxidhiidha waxaana kudbado kajeediyay mas’uuliyiin aad ufarabadan.
Kulanka maanta waxaa dood arimo badan lagaga hadli doono kaga qayb gali doona Gudoomiye kuxigeenka ururka ay kumidaysan yihiin dadyowga aan dowladaha lahayn UNPO Dr Cabdiraxmaan Sheekh Mahdi (Maaday).
Mudane Maaday oo sidoo kalana ah xoghayaha arimaha dibada ee Jabhada Wadaniga Xoraynta Ogadenia ayaa khudbadiisii shalay diirada kusaaray arimaha xuquuqul insaanka ee dunida gaar ahaan shacabka la gumaysto ee Soomaalida Ogadenia, iyo guud ahaan shucuubta kala duwan ee Itoobiya lagu gumaysto.
Doodaha maanta oo ay kaqayb galayaan khuburo waawayn ayaa lagu wadaa in siwayn loogu gorfayn doono gabood falada uu taliska wayaanuhu ugaysto shucuubta kala duwan ee uu gumaysto iyo waliba tacadiyada caalamka kadhaca.
Sidoo kale Mudane Dr Cabdiraxmaan Maaday ayaa kaqayb galay dhagaysi ay baarlamaanka wadanka Taliyanigu sameeyeen kaas oo lagu dhagaystay arimaha xuquuqul insaanka ee wadanka gacanta gumaysiga kujira ee Ogadenia.